umgubo omkhulu wokutya okufumaneka kwimveliso yezityalo nezorhwebo
Umthamo:10~ Iibhokisi ezili-15 / h
Ubungakanani bokugqibela bepellet:2~ 15mm
Isetyenziselwe:Ikati, yehagu, ibhokhwe,inkomo, igusha, umvundla, inkukhu, idada, intlanzi, njl
Iimpahla ezingekasilwa:Umbona,umbona,ingqolowa,ikhekhe ikhekhe,ithambo lokutya,ioli yeentlanzi njl
Fumana uphando I-whatsapp
Umgubo omkhulu wokutya wepellet usetyenziselwa ukubulala umbona ,ingqolowa,umbona,intyatyambo yokuntywila, iwayini emnandi yamazambane, i-clover yengca, ingca yokudlwengula, njl. kukutya kweenkomo, yehagu, ibhokhwe,inkomo, igusha, umvundla, inkukhu, idada, intlanzi, njl. Imveliso yokutya okusetyenziselwa ukutya kumzi mveliso sisixhobo esikhethiweyo sokwenza ukutya kwimveliso yokutya ephakathi kunye nefama nganye yemfuyo. Lo matshini wokutya okusasazinge wokufa unokushenxisa iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zokondla imfuyo, ukutya zasemanzini, ukutya kwesilwanyana, umgubo wengca kunye nesichumisi sezinto eziphilayo.Umatshini oxhotyiswe ngezixhobo zegreyikheyibhile kwisitayile esineemayile ezisuka kwi-1.5mm ukuya kwi-20mm, imveliso yokutya ye-pellet ilungele izixhobo ezahlukeneyo ukufezekisa iziphumo ezintle.
kutheni sisenza ipellet yokutya ?
1.Yiba lula ukugcina. Ukuphalaza isitya sokutya kunye nengca yokutya kufuna into encinci okanye akukho manzi. Ke ngoko, umxholo womswakama wokutya okuxuthwayo ulingana kakhulu noko kwangaphambi kwexesha.
2.Thatha inzuzo yezoqoqosho. Ixabiso eliphantsi kunokutya kokutya okwenziwe ngenyama.
3.Ukugaya kakuhle. Ngonomathotholo oqinileyo bokutya okunerediyo, Umphezulu ogudileyo kunye nonyango lwangaphakathi , Isondlo kukutya okufanelekileyo kwaye kugalelwa ziinkomo.
4.Thintela izifo kunye neparasites. Ukuhluthwa komzimba kuchaphazela imeko yokuxhathisa kwe-trypsin kwiimbotyi kunye nefreyimu kwinkqubo yokuhambisa, ekhulula ukugonyelwa kwaye kuphelise amaqanda eparas kunye ne-pathogenic microorganism ukwehlisa izifo zokwetyisa.
5.Umgubo wokutya wokutya wamkela izinto ezixutyiweyo ukusasaza ukondla kweenkomo ngesizathu sokuthintela ukutya kwabo.ukungafuneki kweepellets zongeza ixesha lokuhlafunisisa iinkomo ukuphucula inkqubo yokugaya ukutya kwazo.
6.Ngenxa yezixhobo zokufudumeza kwinkqubo, i-pellets 'luster ijika ibengcono.Ukufudumeza kubeka kancinci ivumba elimnandi kwiipellets, ngexa ezinye iinkqubo zokwenza ukutya zingenzi.
Ulwakhiwo lwepellet yokugaya enkulu
Umatshini omkhulu wokutya wepellet ikakhulu uqulathe isixhobo sokondla (isikhuseli), imeko,Inkqubo yokuhambisa igumbi, ukhuseleko olugqithisileyo kunye nenkqubo yokulawulwa kombane. Ukutyiswa kwerhasi yohlobo lokufa okushiyekayo kunyanzelwa kwigumbi lokuhambisa kwaye kusasazwe ngabahloli bejubane abahamba ngesantya esiphezulu. Ifakwe ngokufudukayo, ixabiso elifanelekileyo kunye nemveliso ephezulu. Iziphumo zokuphuma zihamba nge-10 ~ 15t / h
Ukukhuseleka kokusebenza kokutya okuphezulu kwengqolowa
1.Ukunxiba ilaphu elifanelekileyo kuyimfuneko ngaphambi kwamava okuqala okuqinisekisa imeko elungileyo.
2.Ukukhwela ukubeka iingalo zakho kumatshini ngombane. Ukuba kuyafuneka, Sebenzisa intonga ukunceda ukulayisha.
3.Yongeza izinto ezinomgubo ngaphambi kokuba uqale umatshini. Kwaye yeka enye emva kokuba umatshini uvaliwe. Kwimeko apho i-rolling roller ishuqula ngokuchasene nethemplethi kwaye ijikeleze ngelize .
4.Ukuba umatshini ubambekile, Isicwangciso sexesha likaxakeka kukuba uyivale kwaye ucinezele ukunyanzeliswa emva koko uzame ukuyivula kwakhona.
5.Qinisekisa ukuba i-rolling yokunyanzela iyahlengahlengiswa lonke ixesha kude kufike ixesha lokuba ibhalthi ijike emva kokusebenza.
6.Jonga ukuqina kwebhanti rhoqo, kwimeko yebhanti etyibilikayo kunye nemveliso ephantsi.
Iiparamitha zobugcisa zeemitha ezinkulu zepellet yokutya
(h / h) 1~ 1.5 1.5~ 2,5 2~ 4 3~ 6 6~ 10
(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5
(mm) 250 300 320 350 420
Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ3.5, Φ4, Φ4.5, Φ5, Φ6, Φ8 njl.
Inkukhu ,idada,umvundla ,igusi,iinkomo ,igusha njl
Ukusebenza nevidiyo yokutya okuphezulu kwepellet yokutya